Degdeg ah, fududaan oo qalbigiisu macaan yihiin - qaab yaab leh Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
Degdeg, fududaan oo macaan, wadnaha qaabab yaab leh
31.01.2014 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Diyaarinta Cuntada iyo Qurxinta, Degdeg, fududaan, macaan!, Fikradaha Guriga, Recipes
Tani waa mid aad u fudud oo dhakhso leh oo lagu sameeyo karinayo qaab farshaxan iyo qurxin. Waxay ku habboon tahay lama filaankii qof la jecel yahay, gaar ahaan fasax. Waxa ugu weyni waa qaab wadne oo aad ka iibsan karto diyaarsanaan - koob qaab macaan oo ah silikone ayaa laga heli karaa dukaammo badan ama waxaad tusaale uga soo qaadan kartaa dhowr lakab oo aluminium ah. Waxaan kugula talineynaa inaad iibsato mid diyaarsan, maxaa yeelay waxay sidoo kale kaaga faa iideysan doontaa dhowr suxuun oo kale oo xiisa leh, laakiin haddii aad go'aansato inaad mid naftaada sameyso, marka hore iska jar jaantus kartoonno ah oo aad ka samaysanayso baaquli wadne qaabkiisu yahay dhowr lakab oo xajmi badan. Si fiican u jilci shaqada kahor. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa cajiinka loo yaqaan '500 cajiinka', oo ah buuxinta dookhaaga iyo dhadhanka qofka inuu la yaaban yahay (kiiskan, jalaato leh dhir, toon, iyo dhir udgoon) iyo hal ukun ah oo ku burburi kara qaado 1. biyo si loo faafo. Haddii aad qorsheyneyso buuxinta u baahan daaweyn kuleylka dheer, tixgelin geli (qiyaastii 25-30min.) Wixii dubista oo u diyaarso haddii loo baahdo.
Wadnaha garaac adiga oo gooya wixii xad dhaaf ah. Dhig buuxinta oo ku duub cidhifyada cajiinka. Ku samee gogo 'qurxin ah dusha sare sida lagu muujiyey, sidoo kale jaantusyo midab leh (isu roga oo u kala dhexjiro spiral ama qaababka goynta). Ku faafi ukunta isku dar oo waxaad ku dubi foornada digriiga ah ee heerkulkeedu sareyso 180 digir ilaa dahabka.
abaabul, cuntada farshaxanka, cuntada farshaxanimada, cuntada sida ugu dhakhsaha badan, cuntada guriga, fikradaha, fikradaha maalinta jacaylka, fikirka qalbiga-qaabeysan, la yaab Maalinta Jacaylka, cuntada sida fudud, wadnaha, fasax yaab, karinayo, cuntada sida la yaab leh, Maalinta Jacaylka Maalinta Jacaylka, Cuntada loo kariyo xawaashka, karinta cajiinka badan-lakab badan, cajiinka cajiinka, karinayo wadnaha, cuntada sida loo kariyo, wadnaha maalinta jacaylka, keega-qalbiyada qaabeeya, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Fikradaha casriga ah ee quruxda badan ee qolka fadhiga
Dhowr naqshad leh oo aad u qurux badan oo qolka nolosha casriga ah. Isku soo biirista quruxda ...
Fikradaha loogu talagalay dhul qurxan oo qurux badan
Ma jiraan wax ka sii yaab badan oo ka badan fasaxa wanaagsan ee jawiga raaxada, nasashada. La soo bandhigay ...
Beerbeel dubay ama foornada beerta dhexdeeda
Haddii aad leedahay jardiino aad rabto inaad ku dhisto hilib dubbiil ama foornada, halkan waxaa ku yaal qaar ...
Fikradaha naxdinta leh ee saqafyada xannibay
Waxay dhacdaa in qurxinta saqafku waa go'aankii ugu dambeeyay ee gudaha ee aan gaadho ee ah ...
Fikradaha Hadiyadaha Maalinta Jacaylka ee Gacmaha
Soo bandhigista fikradaha asaliga ah ee hadiyadda Maalinta Jacaylka ah ee laaluushka ah ee ...
Miiska beerta leh qaboojiyaha
Miisaska jardiinadu waa meel lama huraan u ah qoysaska iyo kulammada saaxiibtinimo ee habeennada diiran. Wax alla ...
Toon isku shiilay zucchini Patison oo leh saytuun iyo kareem
Kani waa karis loogu talagalay zucchini ka buuran oo leh saytuun, kareem, jiis, jiis iyo toon. Patis ...